I-UIP10000 - Amandla aphezulu we-Ultrasonic Cluster - Hielscher Ultrasound Technology
Ngama-Watts angu-10 000, i-UIP10000 iyinqubo yesibili ngobukhulu beprosesa ye-ultrasonic. Yenzelwe ukusebenza kumaqoqo amayunithi amane noma ngaphezulu, ngokucubungula kwevolumu enkulu, njenge-homogenizing, ukusabalalisa nokusabalalisa.
Izinhlelo zokusebenza ze-Ultrasonic zingahle zilandelwe ngokuqondile. Umthamo wokucubungula ukwanda nge-ultrasonic amandla asetshenzisiwe. Izinhlelo zokucubungula ezinkulu zivame ukufuna amandla angaphezu kuka-40kW. Kulesi simo, sincoma ukusebenzisa iqoqo le-UIP10000 noma UIP16000.
Amandla aphezulu we-Ultrasonic processors
Iprosesa ye-ultrasonic i-UIP10000 yenzelwe ubukhulu bezinsimbi ezijwayelekile zezimpahla ezisengqondweni. Ngokungafani ne-UIP16000, i-UIP10000 ivumela ukusetha okuqondile kwe-transducer, kanye ne-sonotrode nokugeleza kweseli ku-standard standard container yezimpahla. Ngakho-ke, isitsha singasetshenziswa iqoqo le-UIP10000 kufaka phakathi ama-generator, ama-transducers, ama-sonotrodes, amaseli wegeleza nokupholisa ukuvala ukuvala.
Ngaphezu kwalokho, uhlelo lwe-turnkey sonication lungabamba, amaphampu, ukudonsa, ama-valve nedatha-interface. Isitsha esinjalo esingu-10ft noma se-20ft senza kube lula ukuthutha, ukusetha nokuqala ku-site yamakhasimende. Iziqukathi ezijwayelekile ziza nezindonga ezenziwe ngomsindo ukunciphisa ukukhishwa kwemisindo ngaphandle kwe-container.
Isicelo ngasinye se-ultrasonic sidinga inhlanganisela ethile enhle ye-sonication amplitude, ukucindezela kwamanzi nokushisa. Lokhu kulungiselelwa okuphelele kungatholakala ebhokisini elincane noma ukuhlolwa kwezinga lesithenjwa, isib. Ngokusebenzisa a I-UIP1000hd (1kW) nge-flow cell. I-UIP1000hd ivumela ukwahlukahluka kwamapharamitha we-sonication kuhla olubanzi. Lapho sekuvele ukubonwa kokulungiswa kwephalamende, ukusebenza kwenqubo kungalinganiswa ngokuqondile. Ngakho-ke, uhlelo lwe-Turnkey luza kuqala ukusebenza ukuze lusebenze ekumeni kahle kwepharamitha. Ithebula elingezansi libonisa amandla okusebenza ajwayelekile wohlelo lwamandla aphezulu lwe-4x10kW.
I-4x10kW Ukusebenzisa Amandla
8 kuya 30m³ / hr
4 kuya 20m³ / hr
0.8 kuya I-8m³ / hr
0.1 kuya 2m³ / hr
Uhlelo Lokuqukethwe Lokuqalisa
Ukusebenzisa ukusetha okuqukathiwe, kusiza ukufakwa nokuqala. Njengoba isitsha sigcina amaprosesa ephelele e-ultrasonic ngamaseli okugeleza nokudonsa, isitsha sidinga ukuxhumeka ekuhlinzekeni kwemithombo yezindaba, ukunikezwa kwamandla, namanzi okupholisa, kuphela. Ukuxhumana kwedatha kuyatholakala ngokuzithandela.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, ukucela ulwazi oluthe xaxa mayelana ne-UIP10000.